HomeWararka MaantaArsenal 0-0 Chelsea: Wenger Oo Markii 13aad Ka Badin Kari Waayey Mourinho Iyo 4 Rikoodhe Oo La Diiday
Arsenal iyo tababaraheeda Wenger ayaa markii 13aad oo xidhiidh ah ku guul-darraystay in ay ka badiyaan Chelsea iyo macallinkeeda Jose Mourinho, markii ay labada kooxood isaga hor yimaaddeen ciyaar aad u xiiso badnayd oo galabta ku dhex martay garoonka Emirates ee Arsenal.
Qorsheyaal ciyaareed oo ay labada tababare soo dhigayeen toddobaadkii u dambeeyey oo mid waliba ku maagganaa in uu ku jebiyo cadowgiisa ka soo horjeeda ayaa ku dhamaaday in uu Mourinho u hirgalay halka Wenger oo garoonkiisa ku ciyaarayey isla markaana muddo dheer shaadh-madoobe noqonayey marka uu Mourinho la kulmo ayaa ku fashilmay in uu guul ku gaadho garoonkiisa.
Qaybta hore ee ciyaarta ayay Chelsea u dhowaatay in ay hoggaanka qabato markii uu laacibka Oscar oo afka hore uga ciyaarayey goolka la galay kubbad taas oo uu ay dirqi isaga badbaadiyeen difaaca Arsenal, hase yeeshee dood badan dhalisay iyadoo gool-wadaha Arsenal ee Ospina uu xanaaqad madaxa laga wada qabsaday kula kacay Oscar.
Inta badan qaybta hore ee ciyaarta waxa gacanta ku haysay Arsenal, laakiin waxa jiray khaladaad badan oo uu garsooruhu galay iyadoo Rikoodhe kale laga diiday Fabregas oo xerada ganaaxa dhexdeeda uu jallaafo u dhigay Cazorla hase yeeshee garsooraha oo aan kaba fogeyn ayaa u qaatay in uu Cesc istuuray, waxaanu siiyey kaadhka digniinta ah ee huruudda. Arsenal ayaa sidoo kale laga diiday rikoodhe, markii uu difaacyahanka Chelsea ee Cahill gacanta ku qabtay kubbad ku socotay goolkiisa.
Kala sarraynta kooxaha
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-0, iyadoo ay awooddana lahayd Arsenal, hase yeeshee markii la isugu soo noqday qaybta dambe ayuu Mourinho beddelay Oscar oo ku dhaawacmay isku-dhacii Ospina, waxaana soo galay weeraryahanka awoodda badan ee Didier Drogba, waxaana isbeddeshay kubbaddii ay inta badan haysatay, weerarkana ahayd Arsenal, waxaanay u gacan gashay Chelsea, taas oo iyadna ku guul-darraysatay inay ka faa’iidaysato fursado ay heshay.
Barbar-dhacan ay dhibcaha ku wadaageen labada kooxood ayay ciyaartooyada Chelsea muujiyeen in ay ku faraxsan yihiin markii ay ciyaartu dhamaatay, iyadoo difaacyahanka ahna kabtanka Chelsea, John Terry uu farxad la dhex boodbooday garoonka, isla markaana ay isku-hambalyeeyeen dhamaan ciyaartooyada Mourinho, maadaama ay u sii dhowaadeen ku-guuleysiga koobka, iyagoo 10 dhibcood oo saafi ah ka horreeya Manchester City oo kaalinta labaad soo gashay.
Ciyaartan waxa kale oo laga calaamadin karaa in ay weji-gabax ku ahayd Arsene Wenger oo ay ahayd in uu ku guuleysto garoonkiisa maadaama lagaga soo badiyey garoonkii Chelsea, waxaana uu dhinac isaga leexin lahaa dagaalka uu Mourinho ku hayo ee ah in uu yahay tababare fashilmay oo aan awood u lahayn in uu ka badiyo Chelsea isla markaana ku guuleysto koobab.
Arooskii Joe Hart: Rooney, Lampard, Lescott, Johnson Iyo Kombany Oo Hogaaminayey Xidigaha Shiday Xaflada + Sawiro
Isbeddel Lagu Sameeyey Sharciga Kubadda Cagta
21/07/2016 Abdiwahab Ahmed
Dundee v Celtic, Partick Thistle v Rangers – Isku Aadka Scottish League Cup Oo La Shaaciyey